Dagaal laga cabsi qabo in uu ka bilowdo Xuduuda Suudaan & Itoobiya | SMC
Home WARARKA MAANTA Dagaal laga cabsi qabo in uu ka bilowdo Xuduuda Suudaan & Itoobiya
Waxaa sare usii kacayaa xiisadda ka dhex oogan dalalka Suudaan iyo Itoobiya ee salka ku haysa dhul ku yaalla xuduudda, ayada labada dhinac ay isku jeedinayaan eedeymo ku saabsan cidda gar-darran.
Muranka soo jireenka ah ee ku saabsan Al-Fashqa, oo ku yaal xuduudaha caalamiga ah ee Suudaan oo muddo dheer ay isticmaalayeen beeraleyda Itoobiya, ayaa waxaa ka dhashay dagaal u dhexeeya ciidamada Itoobiya iyo Suudaan.
Itoobiya ayaa ku eedeeysay Suudaan in abaabuleyso dagaal dhex mara labada dal. Afhayeenka Dowladda Itoobiya oo la hadlay Wargeyska Reutors ayaa sheegay “Intee in le’eg ayay Itoobiya sii wadi kartaa xallinta qaddiyadda iyadoo adeegsanaysa diblomaasiyad? ma jiraan wax aan xad lahayn. Wax walba waxay leeyihiin xad,” Sidaa waxaa laga soo xigtay Dina Mufti Afhayeenka Dowladda Itoobiya.
Wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay sheegtay in ciidamada Suudaan oo hubeysan ay kasoo tallaabeen xadka, islamarkaana ay qabsadeen beero, sidoo kalena ay dhaceen hanti.
Afahayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibedda, Dina Mufti ayaa sheegay in xadgubkaas uu horseeday in dagaal uu ka dhex qarxo xudduudka labada dal inkasta oo ay socdaan wadahadallo lagu xallinayo arrintaas.
Dhinaca kale, Suudaan ayaa dhaleeceysay Itoobiya, waxa ayna sababta xiisadda taagan ku tilmaantay dandaansi ay maleeshiyaad Itoobiyaan ah ka wadaan deegaanka Al-Quraysha oo dhaca bariga.
Wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan ayaa ka codsatay beesha caalamka inay soo farageliyaan xaaladda isla markaana ay dhaleeceeyaan ‘koox hubeysan oo kasoo jeedo gobolka Amxaarada’
Iskudhaca labada waddan ee hadda taagan wuxuu ku saabsan yahay dhulka loo yaqaanno Al-Fashaqa, halkaas oo ah meesha uu gobolka Amhara ee waqooyiga-galbeed uga yaalla Itoobiya uu xadka kala wadaago gobolka Gedaref ee dalka Suudaan.
Al-Fashaqa, oo ku fadhida dhul dhan 600 kiilo mitir ayaa ah dhul ku fiican dhanka beeraha. Waxaa marar badan goobtan uu dagaal ku dhexmaray beeraleyda labada dal. Itoobiya iyo Sudan ayaa waxaa u dhaxeeya xuduud aad u dheer kaas oo dhan 750 kiilo mitir.
Toddobaadkan ayay aheyd markii mas’uuliyiinta Suudaan ay sheegeen in 6 qof oo rayid ah ay dileen ciidamo Itoobiyaan kaddib markii ay weerar ku qaadeen halkaas.
Previous articleWakiilka QM oo gaaray Baydhabo lana kulmay Madaxweynaha K/Galbeed
Next articleUrurada bulshada Liibiya oo ku eedeyay UNHCR dhimashada qaxootiga Soomaaliyeed